गगन थापालाई महेश बस्नेतको जवाफ– बोकाको शैलीले दाईं गरिँदैन, गोरुकै शैली चाहिन्छ Canada Nepal
गगन थापालाई महेश बस्नेतको जवाफ– बोकाको शैलीले दाईं गरिँदैन, गोरुकै शैली चाहिन्छ
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारुढ सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीच सवाल जवाफ हुन थालेको छ ।
विशेषगरी प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशन सुरु भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी नभएको, आर्थिक स्रोत नजुटेको र रिसर्च नभएको विकास निर्माणको शिलान्न्यास गरिएको विषयमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले प्रश्न उब्जाएपछि सवाल जवाफ भएको हो ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले ओली सरकारले तीन वर्षमा के के काम गरेको हो भन्ने विषयमा सदनमै बहस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिए ।
सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेका योजनाका पुस्तक देखाउँदै थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर बहस गर्न चुनौती दिएका हुन् ।
तथ्यांकमा टेकेर संसदमा बहस गर्न आउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका बैठकमा थापाले भने, ‘ मैले यहाँ उभिएर कुनै कुण्ठा पोखेको होइन । यो नेपाल सरकारले लेखेको पुस्तक हो । यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु । तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु, । म तपाईंलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु । तपाईं बाहिरका सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर माथिबाट बोल्ने र तलाबाट ताली बजाउने अनि तपाईंका सांसद संसदमा आएर बाल कविता वाचन गर्ने ?’
यसपछि बैठकमा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले थापालाई जवाफ दिँदै बालहठ नदेखाउन आग्रह गरे । थापालाई जवाफ दिँदै बैठकमा बस्नेतले भने, ‘२०६४ सालमा एमालेलाई जनताले ३४ सिटमा सीमित गरिदिएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई २३ सिटमा सीमित गरिदिएका छन् । समानुपातिकसमेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको ६३ सिट छ । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहठ देखाउने कतिपय साथीभाइहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन र दाइँ गर्नका लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरुलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढंगले त्यसको विरोध गरौँ । रानी पोखरी बनेको, धरहरा ठडिएको, भानु स्कुल बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दै छ ? एक दिनमा १९६ अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले, १६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सडकहरु रणनीतिक सडकको रुपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दै छ ?
एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर एउटा सडक प्रस्तुत गर्छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ भन्नुहोस् । यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानजस्ता कार्यालयहरु व्यवस्थित भएका छन् । अनि, विगतमा भ्रष्टाचार गरेका नेताहरु अहिले फरार छन् । ती कुन पार्टीमा छन्, खोज्नुहोस् । ती नेताहरु अहिले हामीलाई थुन्दै छ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन् । डराइरहेका छन् । टीभीमा इन्टरभ्यु दिइरहेका छन् । ती नेताहरु कुन पार्टीमा छन्, खोज्नुहोस् ।’
चैत्र २६, २०७७ बिहिवार १८:४७:३३ बजे : प्रकाशित